Qaylodhaanta WHO: caabuqyada u adkaysta dawada Antibiotic oo sii badanaya – Kasmo Newspaper
Qaylodhaanta WHO: caabuqyada u adkaysta dawada Antibiotic oo sii badanaya
Updated - January 29, 2018 2:09 pm GMT
London (Kasmo), Tirada dadka qaada caabuqyada adkaysiga u yeelatay dawada ‘Antibiotic’ ayaa sii badanaysa oo manta lagu qiyaasaa, ugu yaraan, nus malyuun qofood dunida.
Xogtaan cusub waxaa qoraysa Warbixintii u horreysay ee Ururka WHO ee Caafimaadka adduunka uu ka soo saaro la-socoshada (Surveillance) gagsiga (Antibiotic Resistance).
Sannadka 2025ka, waxaa la sheegay in Yurub 1 malyuun oo qofood ugu dhiman doonto xanuunno ka dhasha caabuqyo aan la daweyn Karin, halka daraasad laga soo saaray Britain ku tilmaamayso 2050ka xadka u dambeeya oo qiyaastii 10 malyuun dunida ugu dhiman doonto sannad kasta isla dhibtaan oo kale.
Ilaa manta waxaa la hayaa oo qur ah xogta la xiriirta 22 dal, taas oo ayan ku jirin kiisaska adkaysiga caabuqa Qaaxada (Tubercolosis).
Hannaanka la-socoshada GLASS (Global Antimicrobial Surveillance System) waxaa bishii Oktoobar 2015kii bilaabay Ururka WHO si looga hortago qaylodhaan degdeg ah, (Super bug) oo ah bakteeriyaha aaney karin dawadii caadi ahaan loogu talagalay in lagu dilo.
Tirada bukaannada lagu tuhmay caabuqyada adkaysiga leh, boqolleyda inta qabta bakteeriyaha u adkaysta, ugu yaraan 1 dawo oo caadi ahaan loo isticmaalo, si weyn ayay ugu kala duwanyihiin dalalka: 0 ilaa 82%. Adkaysiga dawada Penicillin ee muddada dheer dunida loo isticmaali jiray daweynta oof-wareenka (Pneumonia) waxay u dhexaysaa 0 ilaa 51% dalalka soo gudbiyay.
‘Xogtu waa mid walaac badan, gaar ahaan sababta jeermiga xanuunnada keena oo aan aqoon xuduudaha dalalka’ sidaa waxaa sheegay Marc Sprenger, Agaasimaha Xoghaynta barnaamijka AMR ‘Antimicrobial Resistance’ ee Ururka Caafimaadka Adduunka WHO.
Ilaa manta 52 dal oo (25 ka mid ah hodan yihiin) ayaa ka diiwaangashan Hannaanka GLASS, laakiin Warbixinta 1aad, 40 dal oo qur ah ayaa bixiyay macluumaadka habkooda la-socoshada, 22 daloo qur ahna waxay gudbiyeen xogta heerka adkaysiga.
‘La-socoshada (Surveillance) waa bilowgii, laakiin waa muhiimin la sii ballaariyo, haddii la doonayo in laga hortago mid ka mid ah halista tirada badan ee caafimaadka dunida’ Sidaas waxaa caddeysay Dr. Carmem Pessoa-Silva, sarkaal sare oo ka tirsan WHO isla markaasna ah Isu-duwaha Hannaanka cusub ee la-socoshada ‘Surveillance’.
Noocyada Bakteeriyaha adkaysiga yeeshay ee ugu badan waxaa lagu sheegay: E-Coli, Klebsiella Pneumoniae, Staphylococcus Aureus (MRSA), Streptococcus Pneumoniae, kuwaas oo sababa xanuunnada caloosha, murqaha, neef-mareenka, iwm.
Kuma jirto xogta adkaysiga Bakteeriayaha keena Qaaxada (Tubercolosis), taas oo Ururka WHO sannad kasta ka soo saaro warbixin gaar ah, middii u dambayay ee 2016, kiisaska TBC ee dawada u adkaystay waxay dhammaayeen ugu yaraan 490,000.